January 31, 2019 M.Jo 0
Dadka adeegsada facebook-ga ayaa sii kordhaya ayadoo ay jiraan fedeexooyin xiriir ah oo ku aaddan sida loo maamulo xogta dadka ee gaarka ah iyo dhaliilo la xiriira isku dayga sharikaddaasi ay ku doonayso in ay ku ciribtirto waxyaabaha xun xun ee bartaas lagu wadaago. Sharikaddan wayn ee ay bulshadu kuwada xiriirto ayaa sheegtay in tirada dadka barteeda iska diiwaan galiyey ay ugu yaraan bishii hal mar kor ugu kaceen 9% sanadkii horena ay dadkaasi gaareen 2.32 bilyan oo qof. Kororkaan ayaa imaanaya ayadoo ay jiraan ololeyaal dadka looga digayo in ay ka fogaadaan adeegsiga Sharikaddaas Aas aasaha Sharikadda Mark Zuckerberg ayaa yiri ” Wax weyn ayaan ka baddalnay sida aan u maamulno sharikadda anagoo diiradda saarayna arrimaha ugu waaweyn ee bulshada”. Ayadoo dhaqaalaha sharikadan uu sii xoogaysanayo ayaa haddana waxaa jira walaac laga qabo sida ay sharikaddani u maamusho xogta gaarka ah ee dadka adeegsada barteeda kadib markii ay soo baxday fadeexaddii the Cambridge Analytica data sharing ee dadka xogtooda lagu jabsaday iyo sidoo kale walaac laga qabo in shabakaddaas loo adeegsado dano siyaasadeed. Sharikaddan [Sii aqri]
In Ka Badan 30 Muhaajiriin Somali Ah Oo Meeydkood Laga Helay Xeebaha Jabuuti
Maydadka ilaa 53 ka mid ahaa dadkii ku dhintay dooni ay la socdeen dad tahriibayaal ah ayaa laga helay xeebta Obokh ee dalka Jabuuti. Doonta degtay ayaa ka mid ahayd laba doonyood oo la sheegay inay wadeen dad gaaraya 130 qof oo u socday dalka Yemen. Hay’adda socdaalka muhaajiriinta IOM ayaa iyaduna sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan Obokh ay soo tebiyeen in la soo badbaadiyey 16 qof oo ka mid ahaa dadkii la socday doonida qalibantay. Ciidamada badda Jabuuti ayaa weli wada baadi goobka dad aan weli nolol iyo geeri lagu heynin oo ka mid ahaa rakaabkii la socday doonidan, waxaana aad u yar rajada laga qabo badda laga helo dad kale oo shilkaas ka badbaaday. Sannadkii hore ayey IOM sheegtay inay xeebaha Jabuuti ku dhinteen dad ka badan 150 oo tahriibayaal ah.
Dagaal Dhex Maray Ciidamo kawada tirsan Milateriga Soomaaliya oo ka dhacday Balcad
January 29, 2019 M.Jo 0
Wararka ka imaanaya dagmada Balcad ee Gobolka Sh/Dhexe ayaa sheegaya in maanta ay halkaas ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhexeysa ciidamada ka kala amar qaata masuuliyiin ka wada tirsan maamulka dagmadaas. Xiisada ayaa ka dhalatay sida wararka ay sheegayaan isbaaro lacago looga qaadayay gaadiidka oo ciidamo la sheegay iney ka amarqaataan xoghayaha dagmada Balcad ay dhigteen taas oo cabasho ay ka muujiyeen gaadiidleydii isaga kala gooshayay jowhar iyo muqdisho. Gaadiid fara badan ayaana maanta ku xayirmay isbaarada cusub ee ay dhigteen ciidamada ka amar qaata xoghayaha degmada Balcad sida ay sheegeyn darawaliinta Gaadiidka ee mara wadadaasi. Gudoomiyaha dagmada Balcad ayaa ciidamo u diray si looga qaado isbaarada balse waxa uu dagaal dhex maray ciidamadii dhigtay isbaarada iyo ciidamadii uu gudoomiyaha u diray. Israsaaseyn socotay mudo daqiiqado ah ayaa waxa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh. Inta hada la xaqiijiyay ilaa 6 askari oo dhinac yadii dagaalamay ah ayaa ku dhaawacmay israsaaseynta halka laba kalana ay ku dhinteen. Mas’uuliyiinta degmada iyo maamulka degmada Balcad oo aan la xariirnay kama jawaabin wicitaankayna, waxaan isku [Sii aqri]
Wasiirada Arrimaha Dibadda Kenya iyo Soomaaliya oo heshiis ku kala saxiixday Mandhera
Wasiirada Arrimaha Dibadda Kenya Monica Juma iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa maanta gaaray magaalada Mandhera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya. Sida ay sheegayaan wararka labada dhinac ayaa kulan ku leh magaalada Mandhera, kaasoo looga hadlayo xiriirka labada dal, amniga iyo arrinta Darbiga Kenya ka dhiseyso xuduuda oo ay wadajir u booqan doonaan. Kulanka labaad ee Guddiga wadajirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa looga hadlay arrimo kala duwan oo ku saabsan iskaashiga labada dal Labada Wasiir oo kala hoggaaminayaan Guddiga wadajir ah oo iskaashiga labada dal qaabilsan, waxaana ay ku kala saxiixdeen magaalada Mandhera heshiis labo dhinac ah. Booqashada Wasiirada Arrimaha Dibadda Kenya iyo Soomaaliya ku tageen magaalada Mandhera, ayaa ku soo aaday xilli Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu ku sugan yahay magaalada Nairobi, waxaana uu la kulmi doonaa Madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Faah Faahin Qaraxii Maanta Ka Dhacay Muqdisho
Faah faahin ayaa ka soo baxaya qarax xooggan oo goor dhow ka dhacay agagaarka Xarunta Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta oo ku dhow agagaarka Baar Shabeelle iyo Ex Baarlamaan ee degmada Boondheere. Gaariga ayaa la sheegay inuu ku qarxay kaalin shidaal ku dhegan Wasaaradda Batroolka, waxaana la sheegay in qaraxa uu saameyn baaxad leh uu geystay. Halka qarax ka dhacay ee Kaalinka Shidaalka ayaa waxaa ka ag dhow Maqaayad dad ka cunteeyaan iyo dhismayaal kale oo uu qaraxu saameeyay Wararka ayaa intaa ku daraya in Kaalinta Shidaalka ay gubaneyso, iyadoo la arkayo qiic iyo olol ka baxaya goobta. Waxaa la sheegayaa inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay qaraxa, waxaana laga cabsi qabaa in qaraxdo haamo shidaal ku jira oo dhulka hoostiisa ku jira, haddii uu dabka gaaro.
Deg Deg :Qarax Xoogan Oo Goordhaw Ka Dhacay Muqdisho
Waxaa goordhaw qarax aad u xoogan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu ka dhacay agagaarka Taalada Daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho . Qaraxan goordhaw dhacay ayaa si weyn looga maqlay qeybo badan oo kamid ah magaalada Muqdisho, waxaana goobta uu qaraxu ka dhacay laga arkayaa uuro iyo qiiq madow oo ka baxaya. Wali lama oga khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay qaraxan xoogan ee goordhaw dhacay , waxaana goobta uu qaraxu ka dhacay gaaray ciidamo badan iyo gawaarida gurmadka deg dega.
Yuusuf Garaad”Goan Qaadasho Deg Deg ah Waxaa Ka Muhiimsan In aad Ka Gaabsato”
Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa ku baaqay in laga fiirsado go’aanada la gaaro oo Soomaaliya waxyeeli kara. Qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay oo u muuqday mid uu si gaar ah u taabanayay hadalki Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, balse aanu xusin ayuu sheegay in mas’uul kasta oo wax aan wanaagsaneyn ka sheega Soomaaliya aanay muhiim aheyn in loo jawaabo. “Mas’uul wax aan wanaagsaneyn ka sheega Soomaaliya in aan u jawaabno waxaa ka muhiimsan in aan dalkeenna wax wanaagsan u qabanno oo wax un aan ku biirinno horumarkiisa, Haddii aynan taa karin, ugu yaraan waa in aan ka fiirsanno kana dhowrsanno wax kasta oo waxyeeli kara Soomaaliya”ayuu yiri Yuusuf Garaad. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in jiraan dalal aan laheyn dowlado, oo Soomaaliya ka mid ah, waxaana hadalkan uu noqday hadal heynta ugu badan ee baraha bulshada ku wada xiriirto Soomaalida. Durba waxaa soo baxay shakiyo laga qabo in dowladda Soomaaliya ay qaadato go’aan aan la ogeyn saameynta uu keeni karo, waxaana dad badan oo Diblomaasiyiin ah ku taliyeen in [Sii aqri]
Madaxweyne Keenyata Oo Eritrea u tagaya Joojinta taageeradda Al-Shabaab
Wargeysyada waa weyn ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa maanta daabacay in Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ku wajahan yahay Magaalada Asmara ee Caasimadda dalka Erirea. Sababta ugu weyn ayaa lagu sheegay in ay tahay in dowladda Eritea uu kala hadlo sidii ay u joojin la heyd taageerada la sheegay in ay siiso Al-Shabaab ee ku sugan Soomaaliya, taasoo isugu jirta Hub, Lacag iyo Tababar Ciidan Sida lagu eedeeyay. Madaxweynaha Kenya ayaa ka walaacsan weerarada iyo Qaraxyadda Al-Shabaab ay ku qaadan dalka Kenya, islamarkaana ay xoogeysteen sanadyadii ugu dambeeyay. Warbaahinta dalka Kenya ayaa sheegtay in Sanadkii 2011-kii la xaqiijiyay in diyaarado hub iyo dhaqaallo siday oo ka yimid dhanka Eritrea in ay ku degteen meel ay maamulaan Al-Shabaab. “Waxaan u maleynayaa in qofna uusan shaki ku jirin in Eritrea afartii sano ee la soo dhaafay ay taageersaneyd Al-Shabaab, ayna siin jirtay Hub, Dhaqaalle, tababarayaal, sidoo kale waxay tababartay boqolaal dagaalyahannada Al-Shabaab, kuwaasoo lagu tababaray xeryahooda milatari,” ayuu yiri Rashiid Cabdi, oo ah falanqeeye dhanka Ammaanka ah. Dowladda Eritrea ayaa horay u beenisay dhammaan Eedymaha [Sii aqri]
Soomaaliya Oo kaalinta ugu Hooseysa Ka Gashay Dalalka uu Musuqa Badan aduunka
January 29, 2019 F.G 0
Hay’ada Daah-furnaanta Caalamka ee loo yaqaano Transparency International, ayaa soo saartay Warbixin diirada lagu saarayo waxyeellada musuqa uu ku hayo dalalka Caalamka iyo sida ay tahay in looga hortago. Warbixintan oo ah mid Sanadkiiba mar soo baxdo, ayaa waxaa sanadkii dhamaaday 2018 uu ahaa Sahan ay Hay’adda ku sameysay 180 wadan oo Caalamka ah, kuwaasoo loo kala saaray kuwa uu naafeeyay musuqa iyo kuwa ka guuleystay ee dagaalka xooggan la galay. Sida ku cad warbixintan Transparency International Soomaaliya ayaa ah wadanka kaalinta ugu hoose ka gashay Liiska dalalka uu hoos u dhigay musuqa Dimuqraadiyadda, waxaana ay keentay 10 dhibcood ama 10%, Sidaas waxaa lagu sheegay warbixintan, waxaana Jaantuskan cusub uu muujinayaa in 90% uu musuqa saameeyay Soomaaliya. Wadamada Suuriya iyo Koofurta Suudaan ayaa helay min 13 dhibcood, halka Yemen iyo Waqooyiga Kuuriya ay heleen min 14 dhibcood, dalalka Afghanistan iyo Sudan ay heleen min 16 dhibcood. Gobolka ugu musuqa badan Caalamka ayaa lagu sheegay inuu yahay waddamada ka hooseeya saxaraha Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay, waxaana ay tiradoodu gaareysaa 32 dal. Hay’ada Transparency Internationalayaa dhinaca [Sii aqri]
Dagaalo Xoogan Oo u dhaxeeya Al-Shabaab iyo daacish oo ku Dhex Maray Gobalka Bari
Wararka laga helayo Gobalka Bari ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya Al-Shabaab iyo Daacish uu maanta ka qarxay deegaanka Ceelka Miraale oo qiyaastii 70KM u jira magaalada Boosaaso. Goobjoogayaal ayaa sheegay in ay maqlayeen dhawaaqa rasaas iyo madaafiic culus oo labada dhinac ay is-ku adeegsanayeen. Wararka qaar ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay Daacish ku amreen in ay ka guuraan dhulka wadooyinka ah, markii ay tageen agagaarka Ceelka Miraale. Ilaa iyo hada lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka u dhexeeya Al-shabaab iyo Daacish. Dhinaca kale Ma jiraan weli wax faah-faahfaahin ah oo laga helay dagaalka iyo khasaarihiisa. Hase ahaatee Cabsi badan ayaa xilligan soo wajahday Shacabka ku nool deegaanada ay weli ku dagaalamayaan Al-shabaab iyo Daacish. Sidoo kale Wax war ah Kama Soo Saarin Maamulka Puntland Dagaalada La sheegayo In ay socdaan.